Berbatov oo ka hadlay mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda Manchester United – Gool FM
Dajiye March 24, 2019
(England) 24 Maarso 2019. Weeraryahankii hore kooxda Manchester United Dimitar Berbatov ayaa aaminsan in wareysigii uu Paul Pogba kaga hadlay Real Madrid aysan ka dhigneyn inuu ka tagayo garoonka Old Trafford.
Pogba ayaa dhawaan sheegay kooxda Real Madrid oo gaar ahaan hogaaminayo Zinedine Zidane, ay ka dhigan tahay riyada caruur kasta.
Laakiin Dimitar Berbatov ayaa ka dhigay hadalka Pogba mid iska caadi ah, sababa la xiriira inuu ka hadlay kaliya xirfadiisa kubadda cagta, balse aysan wax isbadal ah ka sameyn doonin mustaqbakiisa kooxda Manchester United.
“Pogba waa mid ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican, waxaana sidaas ku arkay kadib markii aan kasoo wada ciyaarnay kooxda Manchester United”.
“Waxaan rajeenayaa inuu sii joogi doono garoonka Old Trafford, inkastoo ay soo cusboonaadeen wararka lala xiriirinayo kooxda Real Madrid”.
“Waxaan taageeri jiray kooxo badan ee kale markii aan u ciyaarayay Manchester United sababtoo ah waxaan ahaa taageere weyn ee kubada cagta ah, waxaan jeclaa kooxaha sida Real Madrid, Juventus iyo Bayern Munich”.
“Sidaas darteed tani ma ahan wax laga walwalo, sababtoo ah waxaan ku noolnahay caalamka kubadda cagta ee kuu ogolaanaya inaad sheegto waxa aad rabto, Pogba wuxuu ahaan doonaa wakhti dheer ciyaaryahan ka tirsan kooxda Manchester United, inkastoo ay jiraan kooxo xiiseenaya”.
“Ma filayo in Aabahey uu ii ammaani doono sida Jose Mourinho” - Ivan Rakitić